काठमाडौं,१२ जेठ । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभाको आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगन गरिएको छ । विशेष कारण जनाउँदै बैठक मंगलबारका लागि सारिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन…
काँग्रेस कपिलवस्तुद्वारा विपन्न नागरिकलाई राहत वितरण
कपिलवस्तु, २९ चैत । नेपाली काँग्रेस कपिलवस्तुले जिल्लाका बिपन्न नागरिकका लागि “काँग्रेस गरिबको घरमा” अभियान सञ्चालन गरी राहत वितरण गरेको छ । अभियान अन्तर्गत कपिलवस्तु काँग्रेसको क्षेत्रिय समिती, नगर समिती भातृ…
सरकारले जनमत अनुसारको काम गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप
दाङ, १३ फागुन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले बर्तमान सरकारले जनमत अनुसारको काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार दाङको घोराहीमा आयोजित बिचार गोष्ठीमा बोल्दै कांग्रेसका नेताहरुले सरकारको कडा रुपमा…
नवलपरासी, १० फागुन । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परिमार्जन सहित संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ । शनिबार नवलपरासीमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै दाहालले राष्ट्रिय हितमा…
एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित हुनुपर्छ : सभापति देउवा
दाङ, ५ माघ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । प्रेस युनियन दाङले आइतवार दाङको तुलसीपुरमा गरेको…
दाङमा उपनिर्वाचनको मतगणना सुरु, नेकपाको अग्रता
दाङ, १५ मंसिर । प्रदेशसभा सदस्यका लागि दाङ क्षेत्रनम्बर ३ (ख) मा भएको उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अग्रता लिएको छ । बबई गाउँपालिका वडानम्बर १ र तुलसीपुर…
प्यूठान, १५ मंसिर । प्यूठान नगरपालिका वडा नं.२ को वडा अध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मुक्ति पोख्रेल विजयी हुनु भएको छे । नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार मोहनसिंह बिष्टलाई २ सय ८४ मत…
बुटवल, १५ मंसिर । सत्तारुढ नेकपाका दुई प्रभावशाली नेताहरुको वडा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नंं. १६ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ताराबहादुर डाँगी दोब्बर बढी मत अन्तरले विजयी हुनुभएको छ । संघीय…
दाङ उपनिर्वाचन अपडेट : प्रदेश सभामा ५१.१ प्रतिशत र स्थानियतर्फ ५८.३ प्रतिशत मतदान
दाङ, १४ मंसिर । दाङको दुई स्थानमा शान्तिपूर्ण तरीकाले उपनिर्वाचन भैरहेको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्त कडा पारिएको र मतदाताहरुले निर्वाध ढंगले मतदान गरिहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख)…
राजनीतिक भागबण्डामा बनेको अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन : डा. भट्टराई
दाङ, १२ मंसिर । समाजवादी पार्टीका संघिय अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । बिहिवार दाङमा संचारकर्मीसंग कुराकानी गर्दै भट्टराईले राजनीतिक दलको…